Izitimela Zabagibeli | RayHaber
Izindawo ze-Baskentray namathayimitha
Somhambi Zokusebenzela futhi BAŞKENTRAY BAŞKENTRAY BAŞKENTRAY System Map: BAŞKENTRAY kuyinto somhambi uhlelo isitimela elikhonza inhloko-dolobha Turkey e Ankara. Amashumi amabili emugqeni wamakhilomitha we36 phakathi kwesifunda saseSancan naseMamak [Okuningi ...]
Abasebenzi bokuhlanza e-İZBAN baxoshwa kwinqubo yeThenda; Ku-İZBAN AŞ, ebiqhuba inqubo yethenda entsha, inkampani egama linguYeni Vizyon, etholile ithenda, yaxosha isisebenzi se6 esisebenza emisebenzini yokuhlanza. U-Ecevit uxoshe isisebenzi [Okuningi ...]
Isitimela Esinesivinini Esezingeni eliphezulu Asisekho Signalization
Ngokusho kommeli we-CHP, azikho izifundo ezithathwe kule nhlekelele. Iphini lika-CHP Ankara uMurat Emir, ukushoda kokusayinwa kwe-elekthronikhi okwenze ingozi yesitimela e-9 e-Ankara ngonyaka owedlule, eBaşkentray [Okuningi ...]
Iziteshi ze-Gaziray Suburban ne-High Speed ​​Train Depot Construction Tender Result. IGaziray Km: I-11 + 900-16 + 740 Ukucisha nokwakhiwa kweziteshi, isikhungo sokuhambisa isitimela sidlula imisebenzi esele kanye nesitimela sabahamba ngejubane elikhulu [Okuningi ...]
Isitimela sabagibeli abasebenza phakathi kukaGebze noHaydarpaşa sashiyelwa endaweni yaseKöseköy Ngaphambi kokusebenza kwesitimela esinejubane elikhulu, isitimela sabagibeli, esidonswa phansi ngemuva kokusebenza ngesivinini esikhulu sesitimela, silindile sisendaweni engenamsebenzi eKöseköy Logistics Center. amashumi [Okuningi ...]
Iphrojekthi yeMeya Mehmet Zeybek'in AFRAY, okungenye yezethembiso zezinyathelo zokhetho kanye nezifundo inikeze imiphumela emihle. IMeya uZeybek itshele i-ODAK, ukuthi ithenda le-kon AFRAY lizoba ngo-Okthoba. [Okuningi ...]
Nakhu ukwenyuka kwamanani entengo! .. Imali Yezimoto ezintsha, iBhuloho kanye nezimali zeYHT. Ugesi, izintaba zegesi yemvelo ngeke zikwazi ukusinda ekuthuthumela kwezakhamizi; onguthelawayeka kanye nama-toll toll, i-YHT namathikithi wesitimela sabagibeli, ukuthunyelwa [Okuningi ...]